နဖူးအပူချိန်သေနတ်၊ KN95၊ Meridian Analyzer - Hebei အထောက်အထားအခြေခံဆေးပညာနည်းပညာ
မူလတန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စမတ်ကျန်းမာရေး ဦး ဆောင်ပံ့ပိုးပေး
Hebei အထောက်အထားအခြေပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသေးစားနှင့်အလတ်စားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မူလတန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မိသားစု၏ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်း ၀ ယ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်သည်။
ခွဲစိတ်မျက်နှာဖုံး 1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်အဆင့် ...
နားတွင်တပ်ဆင်ထားသောမျက်နှာဖုံး ၁ ။
ပတ်တီးမျက်နှာဖုံး 1. ဒါဟာဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေပါတယ် ...
KN95 ၁။ ပို၍ လှပသောဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်မူ ...
နဖူးအပူချိန်သေနတ်ကိုင် X5 ဤပစ္စည်းအတွက် ...
X6 ခရမ်းရောင်သာမိုမီတာလူကြီးများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် ...
X6 Grey Surezen အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးစက်သည် ...
X6 Straight ၁။ Modes သုံးခု၊
ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၃ သန်းကျော်ရှိသည် နဖူးသာမိုမီတာသန်း 100 ကျော် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများနှင့်အခြားဌာနများအတွက်အလုပ်နှင့်အတန်းများကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးကိုပေးသည်။
ရှိပြီးသားအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အင်တာနက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်ဆေးရုံ၊ ဆရာဝန်၊ မိသားစု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊
မကြာသေးမီကပေကျင်းစာအုပ်ချုပ်ရေးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကအဖွဲ့တစ်ခုကို Air Mail Processing Center သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
၂၁ ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသစ်ဖြည့်စွက်မှုပေါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်ပြီးကတည်းကတစ်ရက်သာဖြစ်သည်။ ၂၂ ကြိမ်မြောက်ဒေသခံ ...
ထိုစကားများပြောသွားသည်နှင့်အမျှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရင်သွေးငယ်တစ် ဦး သည်အဝေးမှမြေကိုအနီးကပ်ခေါ်ဆောင်လာသည်
Hebei အထောက်အထားအခြေပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေစဉ်အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ကာဇက်စတန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့အရေးပေါ်လိုအပ်သည့်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
လိပ်စာ: F / 10၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၃၁၅၊ Changjiang Boulevard၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ Shijiazhuang City
ဖုန်း + 86- 15613301827